Twitch dia mamoaka ny endri-javatra SharePlay efa nandrasana hatry ny ela ao amin'ny iOS | Vaovao iPhone
Twitch dia mametraka ny endri-javatra SharePlay efa nandrasana hatry ny ela amin'ny iOS
alex vincent | 01/12/2021 18:00 | Fampiharana iPhone, iOS 15
Miaraka amin'ny fahatongavan'ny iOS 15, ny fiasan'ny SharePlay dia tonga tao amin'ny FaceTime, izay ahafahan'ny mpampiasa mijery ny toko amin'ny andian-tantara ankafizinay, sarimihetsika na serivisy fampitana mivantana izay mifanaraka amin'izany miaraka amin'ny namana na olona ao amin'ny fianakaviana. Eny, araka ny fanavaozana avy amin'ny Twitch, efa nampidirin'izy ireo io fampiasa io, afaka mahita stream miaraka mandritra ny antso amin'ny FaceTime.
Twitch dia nanampy fanohanana ny fampiasa SharePlay amin'ny sehatra sy fampiharana azy. Noho izany, mamela ny mpampiasa hiara-hijery izay horonan-tsary eo amin'ny lampihazo. Streamer ankafizinay, horonan-tsary nahemotra, fandefasana hetsika lalao video… na inona na inona.
Omaly Twitch dia nanao ny fifandraisana ofisialy tamin'ny alàlan'ny Twitter-ny. Ny safidy sharePlay dia misy amin'ny fitaovana misy iOS 15.1 na ambony mitovy amin'ny iPadOS 15.1. Tsy izany ho an'ny Apple TV, izay tsy mbola misy an'io endri-javatra io.
Mba hanombohana fivoriana SharePlay, ny mpampiasa tsy maintsy miditra amin'ny antso FaceTime mavitrika isika ary hametraka ny fampiharana Twitch rehetra (ankoatry ny hoe logued, mazava ho azy).
Raha vao nanomboka ny fizarana SharePlay tamin'ny FaceTime izahay dia ho ny mpandray anjara rehetra amin'ny antso Ampifandraisina amin'ny toerana iray amin'ny famerenana horonan-tsary. Ho fanampin'izany, ny fanaraha-maso izay misy fiantraikany amin'ny famerenan-dahatsary (miato, milalao, horonan-tsary mandroso haingana na mihemotra) dia harindra ihany koa.
Ary koa, vaovao tsara (ary ampiharina tsara) ho an'ny streamers amin'ity sehatra ity dia ny hoe, ny mpampiasa tsirairay amin'ny antso dia isaina ho mpijery, afaka manana fifehezana bebe kokoa ny mpitsidika anao ary afaka mitantana na mamakafaka ny asanao amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Toa fahombiazana ho an'ny Twitch ny fampiharana io fiasa io aloha, miloka amin'ny fisarihana mpanaraka bebe kokoa amin'ny alàlan'ny vava sy amin'ny fanamorana ny fahafahana maneho hevitra amin'ny namana na fianakaviana amin'ny famokarana na aiza na aiza ary amin'ny fomba mirindra. Miafara amin'izao fomba izao amin'ny hoe "efa nahita ny reniranon'i ...? Rahoviana…". Manantena izahay fa ny sisa amin'ny fampiharana dia havaozina amin'ny fomba mitovy mba hankafizana ity fampiasa ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Twitch dia mametraka ny endri-javatra SharePlay efa nandrasana hatry ny ela amin'ny iOS
Ity no prototype an'ny AirPods sasany sy charger Apple miaraka amin'ny tranga mangarahara tanteraka
Apple Music dia namoaka ny lisitry ny heno be indrindra tamin'ny taona 2021